Local Immigration, Then and Now
Tour – Nepali Food
टुक्राहरू मिलाएर बनाईएको कला
शरीर र आत्मालाई खुवाउने
हाम्रो जीवन खाना मार्फत जोडिएको हुन्छ – खेती गर्ने, खोज्ने, बेच्ने, किन्ने र खाने। हामीमध्ये धेरैसँग खानामा केन्द्रित
बलियो सम्झनाहरू छन्—परिवार र साथीहरूसँग बिदाको खाना, मनपर्ने परिकारको सुगन्ध, वा परिवारसंग भान्सामा सिकेका ज्ञान। बजारमा जादा आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमि, परम्पराहरू, र नयाँ देशमा उनीहरूको सांस्कृतिक समुदायको सम्झनाहरूसँग जोड्ने काम खानालेनै प्रदान गर्दछ।
मो मान्छेलाई जे चीज चाहिएको छ तेही मात्र गर्न खोज्छु।यी मानिसहरू भोकै छन् । तपाईलाइ थाहा छ, कहिलेकाहीँ
मलाई पनि यदि मेरो देशको मनपर्ने खाना पाइन भने, म भोकै छु जस्तो लाग्छ। म विभिन्न खानेकुराहरू खाने कोशिस
त गर्छु, तर मलाई अगाएको जस्तो हुँदैन। तिनीहरूले आफ्नो खाना पाइरहेका छैनन्, तर म यहाँ छु, म तिनीहरूलाई मद्दत
गर्दैछु।—गोमा खड्का, सह-मालिक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङटन
मेरो भाइले सडक रोड छेउको मेरोलाको पसल वा इज्जोको पसलमा गहिरहने कुरा गर्थे। र धेरै परिकारका इटालियन छुर्पी
पनि कुरा गर्थे। यो सबै इटालीबाट आएको हो, र तिनीहरूले क्रिसमसको समयमा क्यालामारीको ठूला टबहरू ल्याउनेछन्।
र उनले भन्थे, तपाईले मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर कुनै पसलमा लैजानुहोस् , म तपाईलाईकहाँ छु भनेर तेहा वरिपरिको
सुगन्ध, चुप्री, र मासुको गन्धबाट बताउन सक्छु। —माइकल एलेन, लेबनानी निवासी, बर्लिंगटन
जन्मभूमि र एक अर्कासँगको सम्बन्ध
खानाको खेती र बाँडफाँडले भिन्नभिन्न संस्कृतिहरुका मानिसहरूलाई नजिक्याछ ।
धेरै जसो अमेरिकन बजारमा पाहिने सामानहरु जस्तै बट्टामा हुने कुराहरु, सुख्खा खाधय्ना सामानहरु, मासु, दुध, र सागपातहरु धेरै संस्कृति को व्यञ्जनहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ| धेरै जसो पहिले पहिलेका अमेरिकन बजारमा पाहिने सामानहरु जस्तै बट्टामा हुने कुराहरु, सुख्खा खाधय्ना सामानहरु, मासु, दुध, र सागपातहरु धेरै संस्कृति को व्यञ्जनहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्थिय। यहूदी ग्राहकहरूका लागि बनिएका कोशेर बजारहरू बाहेक। आजका बजारहरूले भने एसियाली, अफ्रिकी र पूर्वी युरोपेली परम्परागत खाद्य सामान्य वस्तुहरू बेच्छन – जस्तै उष्णकटिबंधीय फलफूल र तरकारी, मसला, सस, माछा र मासु।
बजारका ग्राहकहरूले आफ्नो खानाको स्रोतको ख्याल राख्छन्। आरजीएस नेपाली बजारका अफ्रिकी ग्राहकहरूले विशेष, परिचित स्थानबाट सुकेको माछा मन पराउँछन्। युरो मार्केटमा पोलिश ग्राहकहरू पोल्याण्डबाट किएल्बस चाहन्छन्। सामुदायिक हलाल ग्राहकहरूले अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएका फ्री-रेन्ज हलाल मासुको स्वाद मन पराउँछन्। बजार मालिकहरूले यसको महत्त्व बुझ्छन् र यी उत्पादनहरूको स्रोत खोज्न घण्टा खर्च गर्छन्।
जाडोमा सबैले टुरटियर बनाउँथे| मेरो बुबाले मासु ठीकसँग पीस्नुहुन्थ्यो।टुरटियर क्यानाडियन मासु लगाएर भनाएको पाई हो, र त्यो सुगुर र गाइको मासुको मिसाएर बनाईएको हुन्छ|मेरी आमाले टाउके छुर्पी बनाउनु हुन्थ्यो | त्यो बेला साचैनी सुगुरको टाउकोबाट बनिएको हुन्थ्य। त्यो परपरागत बाउडिन थियो, जुन रगतको ससेज हो। बुबा आफै पसलमा बनाएर बेच्नुहुन्थ्यो। -भ्याल सिकार्ड, छोरी, डोनाट डेनिस, डेनिस मार्केट, बर्लिंगटन
यो एउटै आकारको नहुन सक्छ, वा यसले इराकमा गरेको जस्तो धेरै पैसा ल्याउँदैन, तर यो त्यस्तो चीज हो जसले [ग्राहकहरू] घरमा आउँदा र अरबीमा केही उत्पादनहरू देख्दा घरको सम्झना गराउँदछ। यसले उनीहरूलाई उनीहरूको संस्कृति फेला पार्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूलाई थाहा छ कि तिनीहरू कतै छन्, हुनसक्छ यो सानो सुपरमार्केट भए पनि। —अहमद अरेफकी छोरी, प्रबन्धक, नाडा अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विनोस्की
जब म नियमित सुपरमार्केटमा जान्छु, मलाई चाहिने अफ्रिकी खाना भेट्टाउन सक्दिन। त्यसैले म जानु पर्छ – यो नेपाली स्टोर, अफ्रिकी स्टोर, सोमालियन स्टोर हुन सक्छ, म आफूलाई चाहिने खाना पाउन सक्छु। उदाहरणका लागि, यहाँ तिनीहरूसँग हलाल मासु छ, म मुस्लिम हुँ त्यसैले म [अन्य मासु] खान सक्दिन।—जेनाब काउटे, ग्राहक, सामुदायिक हलाल स्टोर, बर्लिंगटन
खाना खोज्दै: बजारको मालिक
बजार मालिकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूले अनुरोध गरेका खानाहरू पत्ता लगाउन कडा मेहनत गर्छन्। जब भाषा बाधा हुन्छ, मालिकहरूले इन्टरनेट खोज्न र शहरहरूमा खाद्य वितरण गोदामहरू र बजारहरूमा विक्रेताहरू देखाउन आफ्ना ग्राहकहरूद्वारा प्रदान गरिएका फोटोहरू प्रयोग गर्छन्। धेरै मालिकहरूले भर्मन्टमा डेलिभरीको खर्च र सीमितताहरूको कारणले महिनामा धेरै पटक अर्डरहरू लिन लामो ड्राइभ गर्छन्।
पहिलेका बजार मालिकहरूले ठूला शहरहरूबाट विशेष वस्तुहरू अर्डर गर्थे तर धेरैजसो वस्तुहरू स्थानीय फार्महरू, बेकरीहरू, कसाईहरू र पेय पदार्थ वितरकहरूबाट किन्थे। न्यूयोर्क, बोस्टन र मोन्ट्रियल जस्ता शहरहरूमा आफन्तहरूलाई भेट्दा समुदायका सदस्यहरूले खानाहरू पनि फिर्ता ल्याए।
हामीले धेरै अनुसन्धान गर्यौं, जस्तै हामीले ग्राहकलाई सोध्यौं, “तपाईं अफ्रिकाको कुन भागबाट हुनुहुन्छ? कंगो? तपाईं बुरुन्डीबाट हुनुहुन्छ? के तपाई टोगोबाट हुनुहुन्छ?” हामी सकेसम्म धेरै मानिसहरू र उनीहरूले खाने खाना सङ्कलन गर्ने प्रयास गर्छौं, र हामी मिलाउने प्रयास गर्छौं। -रत्न खड्का, सह-मालिक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङटन
यो हाम्रो परम्परागत रोटी मात्र हो, त्यसैले ब्रेडस्टिकहरू हामीले खान्थ्यौं, हामी स्कूलमा हिंड्ने जस्तै। सहरमा, हामीले रोकिने सानो कुनामा धेरै बेकरीहरू थिए। पसल सामान्य मा धेरै सम्झनाहरु छ। —डाडो वुजानोभिक, मालिक, यूरो मार्केट, दक्षिण बर्लिंगटन
खाना खोज्दै: बजार ग्राहक
खाद्यान्न पहुँच—यसको किफायती र घरको निकटता—आप्रवासीहरू बसोबास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हो।
परम्परागत खानाको मागलाई समर्थन गर्न पर्याप्त बजारहरू र व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त ग्राहकहरू हुनुपर्छ।
बीसौं शताब्दीको पहिलो आधामा, बजारहरू विनोस्की र बर्लिंगटनमा केन्द्रित थिए। बासिन्दाले बजार पुग्न अलिकति
पैदल हिँड्नु परेको थियो । बजारहरू अहिले धेरै फैलिएका छन् र सार्वजनिक यातायात वा कार चाहिन्छ – केही नयाँ
अमेरिकीहरूको लागि चुनौती।
धेरै भर्मोन्टरहरू जस्तै, आप्रवासीहरूले पसलहरूमा किनेका कुराहरू पूरा गर्न घरपछाडिको बगैंचामा तरकारी र फलफूल खेती गर्छन्। कोही-कोहीले नयाँ अमेरिकीहरूका लागि नयाँ फार्महरूद्वारा व्यवस्थित प्लटहरूमा परिचित खाना उब्जाउँछन्। समुदायका सदस्यहरूसँग अतिरिक्त फसल बाँड्ने अनौपचारिक अभ्यास मातृभूमिदेखि यहाँसम्म जारी छ।
अरूले साना कृषि उद्यमहरू र आयात व्यवसायहरू सुरु गरेका छन् ताकि तिनीहरूको समुदायलाई बैंगन र कासाभा उत्पादनहरू जस्ता मूल्यवान खाद्यान्नहरू आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
एउटा कुराले मलाई यहाँ भर्मन्टमा बस्ने निर्णय गरेको तथ्य यो थियो कि यहाँ नाडा अन्तर्राष्ट्रिय बजार थियो र यहाँ
अफ्रिकी बजार पनि थियो जहाँ म आएर घरबाट खाना किन्न सक्छु। म पेन्सिल्भेनियामा दुई वर्ष बसें, र मैले त्यहाँबाट
जानुपर् यो किनभने त्यहाँ गएर किन् ने ठाउँ पाउन सकिनँ। —गोमा माबिका, ग्राहक, विनोस्की
र मैले धेरै स्ट्रबेरी र स्ट्रिङ बीन्स, मटर उठाएँ। मलाई बुशेल टोकरी भरेर पसलमा ल्याएको सम्झना छ। मेरो बुबा, जसको
राम्रो हस्तलेखन थियो, धेरै फूली, उहाँले सबै संकेतहरू बनाउनुहुन्थ्यो, “होमग्राउन स्ट्रिङ बीन्स।” —लुइस मारियो इज्जो,
उनकी हजुरआमा कन्सेटाको बगैचा, बर्लिंगटनमा
यो साँच्चै धन्य बिरुवा हो।—मुइसा मुट्युम, मालिक, एम. स्क्वायर भर्मन्ट, विनोस्की
पाक परम्पराहरू मानिसहरूसँग बसाइँ सर्छन् र नयाँ देशमा घुलमिल हुन्छन्। दक्षिण अमेरिकामा पाल्ने कासाभा अफ्रिका र एसियामा मुख्य बनिसकेको छ। yuca वा manioc पनि भनिन्छ, झाडीको पातहरू स्ट्युमा प्रयोग गरिन्छ, र यसको जराहरू पीठोमा भुटेको छ वा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना बनाउन उमालेको, भुटेको वा किण्वन गरिन्छ।
भर्मन्टमा आधारित ग्रीन माउन्टेन कासाभाले धेरै स्थानीय बजारहरू आपूर्ति गर्दछ। “अफ्रिकामा, सामान्यतया, तपाइँ केवल कासाभा पातहरू समातनुहुन्छ, र तपाइँ यसलाई धेरै चिल्लो नभएसम्म हान्नुहोस्। तिनीहरूले तिनीहरूलाई फ्रीजरमा प्याकेज गर्न सिकेका छन्, र तिनीहरू यहाँ बेच्छन्। यो घर जस्तै स्वाद छ।” —फराजा अचिन्द, ग्राहक, एम. स्क्वायर भर्मन्ट, विनोस्की
क्याप्शन: जमेको भेडा र क्वाङ्गा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको परम्परागत कासाभामा आधारित रोटी, एम. स्क्वायर भर्मन्टमा
[लेबनीज समुदाय] ले ब्रुकलिन, न्यूयोर्कबाट मेल अर्डर गर्यो, र यसलाई सहदी कम्पनी भनिन्थ्यो। मलाई मेल अर्डरहरू आउने र स्नाउबरहरू, वास्तविक पाइन नटहरू जस्ता चीजहरू भएको याद छ। तिनीहरूसँग अमार्डिन भनिने चीज थियो। यो खुबानी छाला थियो, र यो पातलो घुमाइएको थियो। व्यक्तिगत परिवारहरूले आफूले चाहेको कुरा भन्थे, र एउटा ठूलो बाकस आइपुग्छ। —मोनिका साइमन फरिंगटन, लेबनानी निवासी, बर्लिंगटन
मलाई यहाँ किनमेल गर्न मन पर्छ। परिवार अद्भुत हुनुको अलावा – म तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु – उहाँले ठूला शहरहरूबाट प्राप्त गरेको उत्पादनको ताजापन, तिनीहरू एसियाली सामग्रीहरूमा विशेषज्ञ छन्, र वास्तवमै राम्रो विविध बजार। तपाईलाई थाहा छ, यो केवल भियतनामी होइन, यो जापानी हो, यो दक्षिण कोरियाली हो। —पीटर मेसेल, रेस्टुरेन्ट मालिक र ग्राहक, थाई फाट, बर्लिंगटन
मेरो बुबा नर्थ स्ट्रीटमा किनमेल गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ धेरै यहूदी पसलहरू थिए। र मलाई लाग्छ कि मेरो बुबा यहूदी मानिसहरूसँग व्यापार गर्न बढी सहज हुनुहुन्थ्यो किनभने सांस्कृतिक रूपमा तिनीहरू हामीसँग अलि नजिक छन् र तिनीहरू सबैले एकअर्कालाई बुझेका छन्, र तिनीहरूले रमाइलो रूपमा साटासाट गर्न पाउँछन्। र उहाँ ती सबैसँग साथी हुनुहुन्थ्यो। —माइकल एलेन, लेबनानी निवासी, बर्लिंगटन
तपाईं कुनै पनि समयमा हिड्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले केहि पनि किन्न पर्दैन, तपाईं केवल पसलमा चिल आउट गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि, यो अर्को घर जस्तै हो, इमानदार हुन। आफ्नै घरमा हिँडे जस्तो लाग्छ, म के भन्दैछु थाहा छ ?—इम्यानुएल ब्रेक्सटन, ग्राहक, आरजीएस नेपाली मार्केट, बर्लिङ्टन